HILARION RARISON : SOKAFY HO AN’NY MPANOHITRA NY TVM SY RNM – MyDago.com aime Madagascar
Nitohy teny amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Nisy ny fifandimbiasam-pitenenana nataon’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Anisan’ny nandray anjara fitenenana tamin’ny ny Ct Hilarion Rarison. Nambarany fa izany fifidianana amin’ny 24 jolay dia tsy misy. Raha ny fahitana ny zavamisy hoy izy eto amin’ny firenena dia tsy mety ny hanaovana fifidianana.Sanatsia isika hoy Hilarion no hitarika ny krizy ho lava fa fifidianana eken’nyrehetra no atao eto. Izahay hoy ity olomboantendry ity tsy hanatanteraka fifidianana raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc. Raha tany tan-dalàna hoy izy dia ny lalàna lany tany amin’ny Cst sy Ct ny tondrozotra. Ka ahoana no tsytanterahina izany. Namafisiny fa avereno ny sesi-tany politika any ivelany, sokafy ny radio. Aminay hoy Hilarion dia tsy misy io fifidianana io. Ny antsika dia hoe omeo kandidà dia io i Neny. Miady ny ao Ambohitsorohitra ao hoy izy naheno an’i Neny. Momba ny dinika ataon’y FFKM dia nambarany fa aorian’io dia be dia be ny zavatra hiova eto satria tsy mieritreritra ho fahavalo antsika Rajoelina fa ireo ao anatiny ireo. Hihemotra io fifidianana io hoy ity mpanao politika ity ny antony dia raha mandeha any amin’ny faritra manerana ny nosy ianao dia hampadany an’i Hajo ireo sefo fokontany, lehiben’ny faritra. Noho izany dia ovao daholo ny rehetra satria manahirana.Ny radiom-panjakana dia tokony hampidirana antsika
12 réflexions sur « HILARION RARISON : SOKAFY HO AN’NY MPANOHITRA NY TVM SY RNM »
EFA TAONA IRAY MAHERY NY TONDROZOTRA MAMETRA IZANY KANEFA DIA TSY MIHANTARA FOANA IZANY ..KA DIA MILA MIHA?DRY INDRAY IZANY E!!
Dia rehefa mba misy zavatra tokony haparitaka, dia tsy tokony ny mpanao gazetin’ny Midi ihany no antsoina ; mimenomenona satria ahilika ry zalahy sasany mpanao gazety, izay mpanohana ny ara-dalàna !
Tsy tokony ny movansa indray no hamatotra ny tongony, tsy hietsika !
18 avril 2013 à 18 h 13 min
Teo aloha ianareo toa tsy nahenona fitarainana tahak’izany ê ! Miala tsiny indrindra amin’ny FIHAVANANA hoy ny fitenenana ! Mitohy kely indray ny fandraisana miliô !
18 avril 2013 à 18 h 19 min
mila mianatra comm koa aloha ireo miteny eny am magro ka!tsy efa niteny ve ny prm?dia tsy asiana resaka aloha iny ,fa ny radio sy ny gadra politika tsy tafavoaka no tokony hetsehana,tena ohatran’ny manao fanahy iniana tsy manaraka ny tenin’ny prm ireto,sa donto otran n’ foza?araka ny tenin’i Kintana,ny mpanao gazety tokony homba ny tena indray no mitapy(vous me direz:c’est Mamy bota son patron),aleo mpanao gazety hafa marina no antsoina e!tokony efa misy direction hafa mintsy izao ny tolona!
Tokony miambina an’i madama izao ny andraikitrareo CST sy CT ireo fa tsy mandany andro mampiesona eny am magro intsony!dia tokony izay lazain’i madama no article momba azy avoakan’ny gazetin’i Mamy bota fa tsy izay tiany avoaka hahalafosany betsaka!
Marina ny anao ry soapeta ! Ny sasany variana misafosafo ary atao vonto-menaka mihintsy ilay safoina, kanefa dia milaza fa « manotra » (mahazo pitiny amin’ilay 47 millions angamba) !
Itony koa dia santionan’ny fahaizana manao « com » manarapenitra !
Vakio ilay paragrafy farany !
Ny avy ao amin’ny tena ihany no manome basy, hitifirana antsika !
Toa isika Zanak’i Dada indray no hapetraka fahasahiranana hoan’i,Dada, satria manao hita foana izay lazainy. Tsy misy lalana handresen’ny tolona raha tsy baiko iray ihany no arahina.Voalohany, i Dada efa nilaza fa tsy hilatsaka, ary tsapa fa nahazo Tery vaimanta izy Nefa Toa tsy fantantsika,akory izany fa dia ny hoe Aleo i Dada ihany no,hilatsaka. Nilaza koa izy fa hiverna, Nefa ny Zanak’i Dada ireto Toa Sady tsy mahita no tsy mahatsapa fa voasakana izy…izany hoe tsy manana ny fandraisaina ny zavatra-misy mihitsy isika, , réalisme io.
I Neny izao no mpifanina ka tokony hanao trôna azy isika fa tsy bêliez inca daholo ndray, fa nifindran’ny aretin y Foza izay mivoaka sy MIADY an-trano.
Manantena ny mpanohana an’ny Raalomanana i Dada hamerina azy…ka mba diniho,tsara izay hevitra izay a tsy ny FAT n’a ny SADC ny Frantsay no,hamerina an’io Dada éto ,fa isika mpanohana azy, ka mila asa izany. Ny ahy izao ny mahasadaikatra ahy dia ilay a saina hikarakara ny fampielazan-kevitra dia i Botozaza sy Mamy R. Izay no hatahorako fa mety hatao ny izay aharesy antsika. Ka izany no ady tokony hatrehina.
Toa isika Zanak’i Dada indray no hapetraka fahasahiranana hoan’i,Dada, satria manohitra foana izay lazainy. Tsy misy lalana handresen’ny tolona raha tsy baiko iray ihany no arahina.Voalohany, i Dada efa nilaza fa tsy hilatsaka, ary tsapa fa nahazo Tery vaimanta izy Nefa Toa tsy fantantsika,akory izany fa dia ny hoe Aleo i Dada ihany no,hilatsaka. Nilaza koa izy fa hiverna, Nefa ny Zanak’i Dada ireto Toa Sady tsy mahita no tsy mahatsapa fa voasakana izy…izany hoe tsy manana ny fandraisaina ny zavatra-misy mihitsy isika, , réalisme io.
I Neny izao no mpifaninana ka tokony hanotrona azy isika fa tsy be kizitina daholo indray, fa nifindran’ny aretin y Foza izay mivaky sy MIADY an-trano.
Manantena ny mpanohana an’ny Ravalomanana i Dada hamerina azy…ka mba diniho,tsara izay hevitra izay fa tsy ny FAT na ny SADC na ny Frantsay no hamerina an’io Dada éto ,fa isika mpanohana azy, ka mila asa izany. Ny ahy izao ny mahasadaikatra ahy dia ilay asaiina hikarakara ny fampielazan-kevitra dia i Botozaza sy Mamy R. Izay no hatahorako fa mety hatao ny izay aharesy antsika. Ka izany no ady tokony hatrehina.
Hay ve mba azonao ihany ry LAZALAZAO ny tiako hahatongavana ê ?
Ny mpanohana ny ara-dalàna rahetra dia vonona !
Fa aoka ho tsorina eto ny raharaha mba tsy hisian’ny fandaniana « énergie » amin’apa ! Ho an’ireo be taraina sy be konetaka : Ataovy ny asa sy andraikitra nankihinina taminareo, mba ho hitan’ny olona ny bainga nivadika, satria efa aman-taonany izao ny vahoaka no niandry an’izany !
Eo dia mamely akaiky hoe: » be koretaka « ,io tsy maintsy alatsaka
rehefa » feno ny kapoaka » hoy ilay fitenenana lesy e!
eto aho dia misaotra ny mpiara-mitolona fa mahafinaritra ny firaisan-kina , dia miala tsiny raha
nanao izay nampahelo ny sasany, tsy misy mpampisosoka aza misosoka koa maika fa misy
anareo akama rehetra mankahery???tiako be daholo nareo , mankasitraka e!!na izaho koa aza
anie toa nadry tsy lavo loha e!!bongo maso foana fa be konetaka e!!tsy nampoiziko ho hampijaly
ahy mafy toy izao ity raharaham-pirenena ity.
Fa angaha noeverinao fa ianao no nataoko hoe BE KONETAKA Ê ? Mba manaraha vaovao fa ….Tsssss !!!! Aiza no andeha ny tolona rahatoa ka tsy manaraka vaovao ????
Araho ny masoko dia ho fantatrao iza IREO be konetaka !!!
Moa ve tsy irony ankizy manao hoe : Dada â.izaho hono…..!!!!
Sitrana ve ilay fo kely feno ratra ???
Izao vao tena mila kapôraly-sefo !!!! MDR !!!
19 avril 2013 à 21 h 17 min
Efa sitrana e!!tsisy mpampisosoka aza misosoka…..
maika fa misy anareo rehetra eto????tafa tsara kah!!
arako ireny fa hainao fa ny nampitomany an’ilay nitifitra ilay Pasitera tery Betongolo iny??
VOLA sy 4.4 lasandry zalahy anie no nampitomany azy t@’iny fa tsy inona akory e!!ilay trozona be iny,
tsy tadidiko ny anarany teo ??manome litika be!Jafera moa???
Précédent Article précédent : Coup de gueule … ils ont pas fini de nous casser les urnes ?
Suivant Article suivant : LALAO RAVALOMANANA : AZO ANTOKA NY FAHAZOANY MIROTSAKA HO FIDIANA